ch6လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch6လုကာ
6:1 အခုတော့ကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ဒုတိယပထမဦးဆုံးဥပုသ်နေ့၌, သူစပါးလယ်ပြင်ရှောက်အဖြစ်, တပညျ့တျောတို့သဘောဇဉ်၏နားခွဲထုတ်သူတို့နှင့်စားသောက်ခဲ့ကြ, သူတို့လက်၌သူတို့ကိုပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်.
6:2 ထိုအခါအချို့သောဖာရိရှဲတို့ကလညျး, "အဘယ်ကြောင့်သင်ဥပုသ်နေ့အပေါ်အပ်သည်မဟုတ်ဘာလုပ်နေလဲ?"
6:3 ထိုအခါသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်, ယရှေုသညျဟုပြောသည်: "သင်ကဒီစာမဖတ်ဖူး, သူသည်မွတ်သိပ်သောအခါ, ဒါဝိဒ်သည်အဘယျသို့, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို?
6:4 သူသညျဘုရားသခငျ၏အိမျတျောသို့ဝငျကိုဘယ်လို, နှင့်ရောက်ရှိခြင်းမုန့်ကိုယူ, နှင့်စား, သူနှင့်အတူရှိကြ၏သောသူတို့အဖို့ကပေး၏, မည်သူမဆိုသားကိုစားရန်အဘို့အကအပ်သည်မဟုတ်သော်လည်း, တယောက်တည်းယဇ်ပုရောဟိတ်များ မှလွဲ.?"
6:5 ထိုသူတို့အားဆို၏, "လူသားများအတွက်သခင်သည်, ပင်ဥပုသ်၏။ "
6:6 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, အခြားသောဥပုသ်နေ့၌, သူသည်တရားစရပ်သို့ ဝင်., သူဆုံးမသွန်သင်. ထိုအရပ်၌တစ်ဦးတယောက်ရှိ၏, နှင့်သူ၏လက်ျာဘက်၌သွေ့ခြောက်ခဲ့သည်.
6:7 ထိုအခါကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကသူဥပုသ်နေ့၌အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ်လို့ရှိမရှိစောင့်ကြည့်လေ့လာ, သူတို့အားဖြင့်သူ့ကို၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာတွေ့အံ့သောငှါဒါ.
6:8 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူကသူတို့အကြံအစည်ကိုသိ, ဒါသူသည်တဘက်သေလက်သေသောသူအားဆိုပါတယ်, "ထလော့နှင့်အလယ်ရပ်တယ်။ " ထိုအထ, သူကရပ်.
6:9 ထိုအခါယရှေုကလညျး: ဒါဟာကောင်းသောလုပ်ဖို့ဥပုသ်နေ့အပျသညျဟုဆိုပါက "ငါသည်သင့်ကိုမေး, သို့မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကို? အသက်မှကျန်းမာရေးပေးရ, သို့မဟုတ်ပါကဖျက်ဆီးဖို့?"
6:10 လူတိုင်းမှာလှည့်ပတ်ရှာနေ, သူကလူကိုပြောဆို၏, "။ သင်၏လက်ကို Extend" ထိုအခါသူကတိုးချဲ့. မိမိလက်ပကတိဖြစ်လေ၏.
6:11 ထိုအခါသူတို့ကရူးသွပ်မှုနှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်, သူတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးတင်ပြ, ဘာ, အထူးသဖြင့်, သူတို့ယေရှုအကြောင်းပြုအံ့.
6:12 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, သူဆုတောင်းဖို့တောင်ပေါ်မှထွက် သွား.. ထိုမင်းသည်ညဉ့်ကိုတလျှောက်လုံးဘုရားသခငျ၏ပဌနာ၌ရှိ၏.
6:13 မိုဃ်းလင်းသောအခါအရောက်လာပြီး, သူသည်မိမိတပည့်ဟုခေါ်တွင်. ထိုမင်းသည်သူတို့အထဲကတကျိပ်နှစ်ပါးကို ရွေးချယ်. (အဘယ်သူကိုသူလည်းတမန်တော်အမည်ဖြင့်မှည့):
6:14 ရှိမုနျကို, အဘယ်သူကိုသူအမည်သစ်ကိုရသောပတေရုက, နှင့်သူ့ညီအန္ဒြေ, ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်, ဖိလိပ္ပုနှင့်ဗာသောလမဲ,
6:15 မဿဲနှင့်သောမတ်စ်, အာလဖဲ၏သားယာကုပျ, ရှိမုန်ဇေလုပ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောသူသည်,
6:16 ယုဒနှင့်ဂျိမ်းစ်၏, ယုဒရှကာရုတ်နှင့်, တစ်ဦးသစ္စာဖောက်သူအကြီး.
6:17 And descending with them, he stood inalevel place withamultitude of his disciples, andacopious multitude of people from all of Judea and Jerusalem and the seacoast, and Tyre and Sidon,
6:18 who had come so that they might listen to him and be healed of their diseases. And those who were troubled by unclean spirits were cured.
6:19 And the entire crowd was trying to touch him, because power went out from him and healed all.
6:20 နှင့်သူ၏တပည့်ဖို့သူ့မျက်စိချီ, ဟုသူကပြောသည်: "မင်္ဂလာရှိသင်သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏, သင်တို့အဘို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဖြစ်ဘို့.
6:21 ယခုဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောသင်မင်္ဂလာ, သင်စိတ်ကျေနပ်မှုရကြလိမ့်မည်များအတွက်. ယခုတွင်ငိုကြွေးသောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိနေကြသည်, သငျသညျကိုရယ်မောရကြလိမ့်မည်များအတွက်.
6:22 ယောက်ျားသင်တို့ကိုမမုန်းခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်အခါမင်္ဂလာရှိသင်ရကြလိမ့်မည်, သူတို့သည်သင့်ကွဲကွာနှငျ့သငျကဲ့ရဲ့ကြပြီမည်သည့်အခါ, မကောင်းသောအကျင့်ကိုလျှင်အဖြစ်သင်တို့၏နာမနှင်ထုတ်ခံရ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားသည်၏.
6:23 တနေ့နှင့်ရွှင်လန်းခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်. ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, ကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ. ဤသူတို့သည်တူညီသောအမှုအရာဘို့မိမိတို့ဘိုးဘေးများသည်ပရောဖက်တို့ကိုပြု.
6:24 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ချမ်းသာကြွယ်ဝနေသောသင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိ၏, သင်သည်သင်၏သက်သာခြင်းရှိသည်.
6:25 ကျေနပ်မှုနေသောသင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိ၏, သင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်များအတွက်. ယခုရယ်တတ်သောသင်တို့သည်အမင်္ဂလာ, သင်တို့သည်ညည်းတွားငိုကြွေးကြလိမ့်မည်များအတွက်.
6:26 ယောက်ျားသင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိသည်ဟုမည်သည့်အခါသင့်အားမင်္ဂလာရှိ၏. ဤသူတို့သည်တူညီသောအမှုအရာဘို့မိမိတို့ဘိုးဘေးများသည်မိစ္ဆာပရောဖက်ပြု.
6:33 And if you will do good to those who do good to you, what credit is due to you? တကယ်ပါပဲ, even sinners behave this way.
6:35 So truly, love your enemies. ကောင်းသောအကျင့်, and lend, hoping for nothing in return. And then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and to the wicked.
6:36 ထို့ကြောင့်, be merciful, just as your Father is also merciful.
6:38 Give, and it will be given to you:agood measure, pressed down and shaken together and overflowing, they will place upon your lap. မုချ, the same measure that you use to measure out, will be used to measure back to you again.”
6:39 ယခုသူကသူတို့ကိုအခြားနှိုင်းယှဉ်သို့ပြောသည်: "ဘယ်လိုလူကန်းသည်လူကန်းကိုလမ်းပြနိုင်? သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးသည်မြေတွင်းထဲသို့ကျလိမ့်မည်မဟုတ်?
6:40 အဆိုပါတပည့်သည်ဆရာထက်မက. ဒါပေမယ့်အသီးအသီးနှင့်ပြည့်စုံရလိမ့်မည်, သူသည်မိမိဆရာကဲ့သို့လျှင်.
6:41 အဘယ်ကြောင့်သင်တို့၏ညီအစ်ကိုမျက်စိ၌ကောက်ရိုးမြင်ဘူး, သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်စိ၌မှတ်တမ်းစဉ်, သငျသညျကိုစဉ်းစားကြဘူး?
6:42 သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုအားဆိုနိုင်ပုံကို, '' ညီအစျကို, ငါ့ကိုအသင်၏မျက်စိကနေကောက်ရိုးဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြု,'' သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိထဲမှာမှတ်တမ်းမမွငျပါဘူးစဉ်? အရခွေုံ, ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိကနေ log ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ, ပြီးတော့သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်, သင်သည်သင်၏အစ်ကိုရဲ့မျက်စိကနေကောက်ရိုးထုတ်ဦးဆောင်စေခြင်းငှါဒါ.
6:43 မကောင်းတဲ့အသီးကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဘယ်သူမျှမကောငျးသောအပငျရှိသေး၏အဘို့, မဟုတ်သလိုတစ်ဦးကိုမကောင်းသောအပင်၏အသီးကိုကောင်းသောအသီးကိုသီးပါဘူး.
6:44 အသီးအသီးများနှင့်အပင်ရှိသမျှအသီးကိုသီးသဖြင့်လူသိများသည်. သူတို့သည်ဆူးပင်ကနေသင်္ဘောသဖန်းသီးကိုစုသိမ်းမ, မဟုတ်သလိုသူတို့ဆူးပင်ချုံပုတ်ထဲကနေစပျစ်သီးကိုစုသိမ်းကြပါ.
6:45 သူတော်ကောင်း, သူ၏စိတ်နှလုံး၌ကောင်းသောစပါးကျီထဲကနေ, ကောင်းသောအရာကိုကမ်းလှမ်း. တစ်ခုနှင့်အဓမ္မလူ, ထိုမကောင်းသောအကြီထဲကနေ, မကောင်းသောအမှုအဘယ်သို့ကမ်းလှမ်း. စိတ်နှလုံး၏ကြွယ်ဝခြင်းသည်ထွက်, ခံတွင်းစကားကိုပြောဆိုတတ်၏.
6:46 သို့သော်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်ကြပါ, 'သခင်, သခင်ဘုရားသည်,'' နှင့်မငါဆိုသည်ကားအဘယ်သို့ပြု?
6:47 ငါ့ထံသို့လာသောသူမည်သည်ကား,, ငါ့စကားကိုနားထောငျ, သူတို့နှင့်ပေ: ငါသူနှင့်တူ၏သင်သည်အဘယ်သို့မှထုတ်ဖေါ်လိမ့်မည်.
6:48 သူကအိမ်တအိမ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့လူကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏, အဘယ်သူသည်နက်စွာတူးသခဲ့ပြီးယင်းကျောက်ပေါ်မှာတိုက်မြစ်ကိုချတော်မူပြီ. ထိုအခါ, ရေလွှမ်းမိုးသောလာသောအခါ,, မြစ်ကိုထိုအိမျကိုဆန့်ကျင်ဟုန်းဟုန်းခဲ့သည်, ကရွှေ့ဖို့မတတျနိုငျ. ထိုသို့ကျောက်ပေါ်မှာတည်ထောင်ခဲ့များအတွက်.
6:49 သို့သော်အကြင်သူသည်နား ထောင်. ပြုမထားဘူး: သူသည်မြေဆီလွှာပျေါမှာအိမျတညျဆောတစ်ဦးသည်လူကဲ့သို့ဖြစ်၏, ဖောင်ဒေးရှင်းမပါဘဲ. မြစ်ကိုဆန့်ကျင်တဟုန်တည်းပြေး, ထိုသို့မကြာမီပြပ်ဝပ်, ထိုအိမျ၏ပျက်စီးခြင်းသို့ကြီး။ "